janvier 2018 - Page 74 sur 75 -
Polisim-pirenena : Voafehy ny filaminana tamin’ny fety
Toa ny tamin’ny fankalazana ny fetin’ny krismasy, dia nieren-doza tanteraka ihany koa ny fankalazana ny fetin’ny faran’ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao 2018 teto Antananarivo-Renivohitra. Samy nanao fety am-pilaminana avokoa, na ireo izay …Tohiny
Notsenaina tamim-pifaliana. Tamin’ny ankapobeny, dia samy nanana ny fomba nentiny namarana ny taona 2017 sy nandraisana ny taona vaovao 2018 ny tsirairay sy ny isam-pianakaviana. Ho an’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia nanankina ny taona vaovao …Tohiny
Nifarana teo amin’ireo tsy manan-kialofana ny asan’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ho an’iny taona 2017 iny. Ny 30 desambra 2017 lasa teo, tokony ho tamin’ny 9ora alina tany ho any, dia nidina nijery manokana ireo tsy …Tohiny
Omaly no nanatanterahana ny andron’ny manamboninahitra tetsy amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha izay notronin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay niatomboka tamin’ ny famoriana notronin’ ny filoha faratampon’ny foloalindahy izany. Mandritra ny famoriana ihany koa no nananganana ny ...Tohiny